Orinasa mpanohana ankavia - mpanamboatra mpanohana an'i China Ankle, Mpamatsy
Fanohanana ny boribory silikaone
Ny fanohanan'ny kitrony dia ampiasaina amin'ny fisorohana na hanamaivanana ny fanaintainana noho ny sakamalaho sy ny ratra. Double-kanal silicone anti-skidika, teknolojia telo-dimensional 3D, silicone mat avo roa fiarovana, dehumidification fofonaina mandà ny sultry. Izy io dia mahomby amin'ny fisorohana ny ratra amin'ny fihenan-tongotra mandritra ny hetsika ary amin'ny fomba mahomby amin'ny fiarovana ny hozatra sy ny tonon-damosina.
Fanohanana fonosana tokana iray
Ny akora dia vita amin'ny lamba fanamainam-bolo OK tsy misy volo. Ny asa tanana dia manja karaoty fanjaitra efatra sy enina andalana ary ireo fiara ambony sy lava ambany dia voafatotra sy mahazo aina. Ny mpiambina ankihidy dia ampiasaina amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny tonon-taolana. Ity modely ity dia manamboatra fomba fitondra-miendrika misokatra, izay azo amboarina arakaraka ny halehiben'ny ankibeny.
Fehezan-kiraro fanohanana ny ankaviana
Lamba miavaka, famolavolana fofonaina manempotra hatsembohana ary mamela ny tongony ho maina sy tsy misy fofona. Fanohanana optimum amin'ny fiaretan'ny hozatra, ny famolavolana teknisianina manokana izay mifangaro amin'ny tonon-taolana samihafa. Maloka sy matanjaka, hisorohana ny fikorontanan'ny volo ho an'ny tongotra. Ny fiarovana feno dia mampihena ny fikosoham-bolo amin'ny ankihony mba hanamaivanana ny sakamalaho, ary miaro ary manamaivana ny fanaintainan'ny fambolena plantar fasciitis.
Kiraro matevina amin'ny tady
Ny akora neoprene-mifangaro azo tanterahina, hatramin'ny 11 '' amin'ny tongotra an-tongotra tongotra. Famolavolana kiraro misokatra, mety ho fanatanjahantena anatiny sy ivelany, manome fanampiana ny tenda sy ny tonon-taolana. Mitana hafanana ny fitaovana neoprene fofonaina ary miaro ny aretin-koditra. Mahafatifaty, mora mampifanaraka, mateza ary azo sasana, mora hoditra ary elastika avo lenta.
Izy io dia vita amin'ny neoprene, elastika, matevina ary mifoka rivotra sy mampientam-po amin'ny fanamainana haingana. Noho izany dia azonao atao ny mahazo ny stabilizer ankle dia mahazo aina handany ny andro. 360 degre manodidina ny fanohanana amin'ny ankihibenany, ny fahamarinan-toerana, ny fanohanana mahery vaika. mirongatra ny ankihiben-tànana miaraka amin'ny fanamafisana amin'ny lafiny fanamafisana sy ny famolavolana arak'izay nivoatra haingana dia mampihena ny fanaintainana sy ny tsindry amin'ny ankihibe.
Fanohanana ankitsitsiana fanindroany
Fomba manokana: Ny haben'ny Neoprene ny S manohana ankohonana 3.Mety mety hitafy ny famolavolana 4.Elastika dia tsy hisy fiantraikany amin'ny hetsika ataonao 5. Ny fahatsapana fametahana tsara dia afaka manarona ny kitrokelinao tanteraka.